विवेकशील साझालाई कांग्रेसको ‘ओभरटेक’ - Dainik Nepal
विवेकशील साझालाई कांग्रेसको ‘ओभरटेक’
सत्याग्रहको राजनीतिक ‘क्रेडिट’ तान्दै मुख्य प्रतिपक्षी
दैनिक नेपाल २०७५ असार २७ गते ९:५८
काठमाडौं, २७ असार । सामाजिक र जनतासँग जोडिएको मुद्दामा बारम्बार अनशन बसीरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी र कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनशन बसेकी गंगामाया अधिकारीको सत्याग्रह मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि ‘रोड टु पार्लियामेन्ट विजनेश’ बनेको छ ।
सुसंस्कृत राजनीतिको नारा लगाउने विवेकशील साझा पार्टीले उचाल्दै आएको मुद्दालाई सदनको मुख्य विपक्षीले नै बोकेको छ । एक अर्थमा विवेकशील साझाको राजनीतिक मुद्दा कांग्रेसको ‘ओभरटेक’मा परेको छ । स्मरण हुनुपर्छ– अधिकारी हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अनशन बसेका बेला तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले माग पुरा नगर्दा सत्याग्रह आन्दोलनका क्रममा नै नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको थियो । जसको शव अहिलेसम्म उठेको छैन । तर यसबेला सांसदकै नेतृत्वमा कांग्रेसले अवस्था बुझ्नेगरी समिति गठन गरेर आन्दोलन चर्काउनुको अर्थ के हो ?
विश्लेषकहरू भन्छन्– पोलिटिकल विजनेश ।
दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार बलियो भएपछि उसले सदनमा पास गराउनसक्ने विधेयक, पारित गराउनसक्ने कानुन, राजनीतिक नियुक्तिमा एकाधिकार देखाउन थालेपछि कांग्रेसँग प्रतिरक्षाको राजनीति गर्ने मुद्दा अभाव भयो । यसकारण उसले सत्याग्रहीको आन्दोलनलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गराउन लागेको हो ।
संसदमा न्युन संख्यामा उपस्थिति भएपछि कांग्रेसले सडकका मुद्दालाई पनि राजनीतिक अनुकुलताका हिसाबले ‘पिक अप’ गर्नु उसको बाध्यता बनेको छ । यसअघि डा. केसीको सत्याग्रहको राजनीतिक ‘क्रेडिट’ विवेकशील साझाले लिँदै आएको थियो ।
डा. केसीसँग सरकारको सहमति हुन सकेको छैन । उनका ७ माग छन् । त्यसमध्येको प्रमुख माग सरकारले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हो । तर, त्यसमा परिवर्तन नगरी पारित हुन नसक्ने सरकारी अडान अहिलेको विवादको मुख्य कारक हो ।
केसीसँग सम्वाद गरेर परिमार्जित प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरेका थिए । तर केसीले ओलीसँग सम्वाद गर्न चाहेनन् । यसको राजनीतिक मुनाफा कांग्रेसलाई भएको छ । केसीको मागका सन्दर्भमा जुम्लामात्र होइन, सदनमात्र होइन, सडकसम्म कांग्रेसको कव्जामा आएको छ । उसले निषेधित क्षेत्रमा दिनहुँजस्तो प्रदर्शन मात्र गरेको छैन, यहि कारण देखाउँदै पहिलो पटक संघीय संसद पनि अवरुद्ध पारिसकेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा मुख्य प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारमाथि अभियोग लगाउने दह्रो मुद्दा पाएका छन् ।
डा. केसीका यी माग कांग्रेस नेतृत्वका विभिन्न सरकारसँग पनि थिए । कतिपय त सम्झौता ने भएका थिए । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यहाँसम्मकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा मागेरै केसी अनशन समेत बसेका थिए । त्यसबेला कांग्रेसले केसीका मागमा कुनै जायज सर्त देखेको थिएन । अहिले उनै केसीका मुद्दामा कांग्रेसले राजनीतिक विषयको रबर जस्तो तन्काइरहेको छ ।
कांग्रेसको यो सक्रियताले विकल्पको राजनीतिक मुद्दालाई सडकमा भद्रताका साथ उठाउने शक्तिको चाहीँ विचल्ली भएको छ । उनीहरूसँग रहेको ‘इमान’को मुद्दालाई पनि परम्परागत राजनीतिक शक्तिले उठाएपछि बाँकी के नै छ र ? एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘बाग्मती सफा गर्न पठाऔं ।’